| 2021 Sep 20 | 01:07 pm	197
काठमाडाैं, असोज ४ः महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चोरीको मोटरसाईकल र स्कुटर सहित १ जनालाई गोकर्णेश्वरबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । महाशाखाको पीडित सहायता ईकाइबाट सादा पोशाकमा खटिएको ट्राफिक प्रहरी टोलीले गोकर्णेश्‍वर नगरपालिका वडा नं. ६ नयाँबस्तीबाट दोलखा कालिञ्चोक घर भई हाल बौद्ध बस्ने वर्ष २४ को तेज बहादुर खड्कालाई मोटरसाईकल चोरीको अभियोगमा पक्राउ गरेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ ।
बिशेष सुराकीको आधारमा निजलाई पक्राउ गरी निजले लुकाई पार्किङ्ग गरी राखेएको बा५६प ४५४४ नंम्बरको पहेलो रङको डिओ स्कुटर फेला परेको हो । उक्त स्कुटर यहि असोज १ गते मकवानपुर मनहरीका किरण वाईबाले ललितपुरको खुमलटारमा पार्किङ्ग गरको अबस्थामा हराएको भनि महाशाखामा जानकारी दिएका थिए ।
थप अनुसन्धान गर्दै जाँदा निजले चोरी गरि बास्तबिक नम्बर परिवर्तन गरि प्रदेश३-०२-०१०प ७४४ नम्वर प्लेट भएको कालो रातो रंगको २२० सी.सी.को पल्सर मोटरसाईकल समेत फेलापारेको हो । वास्तविक नं. बागमती प्रदेश०२- ०१७प ७८०३ भएको उक्त मोटरसाईकल यहि भदाै ३० गते काठमाडाैंकाे काँडाघारी स्थित पार्किङबाट हराएको खुल्न आएको छ । उक्त मोटरसाईकल भोजपुर वडा नं ५ बोखिम घर भई काँडाघारी बस्ने बिशाल तामाङ्गको रहेको पत्ता लागेको छ ।
पक्राउ परेका व्यक्तिलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागी महानगरीय प्रहरी बृत्त सातदोबाटोमा बुझाएको महाशाखाले जनाएको छ ।